Sir Alex Ferguson Oo Udiiday Ciyaaryahanada Da’da Yar Inay Wataan Baaburta Raaxada Ah
Tuesday August 28, 2012 - 12:59:59 in Maqaallo by Super Admin
Sir Alex Ferguson ka Hogaamiya kooxda Manchester United ayaa amar kusoo rogay ciyaartoyda da’da yar inaysan wadan karin Baabuurta sports-ka ee ay bixineyso shirkada ay wada shaqeynta ka dhaxeyso ee Chevrolet.
Naadiga United ayaa dhawaan heshiis taarikhi ah la gashay shirkada Baaabuurta sameysa ee dalka Mareyknka laga leeyahay Chevrolet, kuwaasoo lagu xayaysiin doono maaliyada United laga bilaabo xilli ciyaareedka 2014-15.
Heshiiska ka dib shirkada Chevrolet ayaa u soo bandhigtay ciyaartoyda Man United baabuurta raaxada, waxaana isla markiiba hore ka qaatay qaar ka mid ah ciyaartoyda magaca leh ee kooxda u ciyaaraya.
Si kastaba ha ahaate waxay , jariirada Ingariiska kasoo baxda ee Daily Mail ayaa ilo muhiim kasoo xigatay in Ferguson uu diidma ka keenay amarna kasoo saaray arintaas sharci ah in ciyaaryahan ka yar da’da 23 sanno heer walba haka joogee naadiga inuusan wadan karin gaari Sports ah.
Sharcigaan ayaa waxa uu durbadiiba qabanayaa ciyaartoyda yar kuwaaso ay ugu horeeyaan Welbeck, 21, iyo Daafacyada Phil Jones, 20, Chris Smalling, 22, iyo Rafael, 22, ciyaaryanadan ayaanan wadan karin baabuurtaan uusan soo ogolaan Sir Ferguson.
Ferguson ayaa amar ka noocaan oo kale mar walba sidan usoo saara asaga Labo sanno ka hor, ciyaartoyda juunyeerka u diiday inay ku ciyaaraan kabo midabo badan leh.